Umhlahlandlela Wokusebenza We-Iphone, Mac, Iwindi Pc
Le bhlogu inikeze imininingwane yokuthi ungasilanda kanjani isikhathi se-Pc, Android, nefasitela ngisho nakuMacbook. Izinyathelo nezinqubo zinikezwa kule bhulogi kokuthunyelwe ngakunye okuzokwenza umsebenzi wakho ube lula.
Ungakuchaza kanjani ukulalela ku Umculo zakho zokusebenza ozikhethile ku-Apple Buka nokuthi ukwazi ukulalela? Zonke izinto kubhekwe, ukuthi uncika phezu imodeli wakho wokubuka. Lapha uzothola yonke imisebenzi ehlukene ungenza usebenzisa Apple lwakho lokubuka ngaphandle abhanqiwe iPhone. Noma yimuphi Apple Buka egijima watchOS 4.1 noma ngaphezulu kuzokunika amandla okulalela amaqoqo nohlu lwadlalwayo olwenziwe … [Funda kabanzi...] mayelana nokuthi Ungayisebenzisa Kanjani i-Apple Watch Yomculo Ngaphandle Kwefoni
Ubuso Isikhathi uhlelo lokusebenza emangalisayo adalwe Apple Inc. Lo mkhiqizo isiqophi sefoni uye aweve kwaba lula ukuba ixhunywe nabanye ngokwenza ividiyo noma umsindo izingcingo. Lolu hlelo lokusebenza amazing Face Time ezifakwe nawo wonke amadivayisi asekelayo iOS futhi kumakhompyutha Macintosh ne-Mac OS X 10.6.6 futhi kamuva. Download Facetime for MAC facetime for mac free download … [Funda kabanzi...] about How To Install and Use Facetime In Mac
Mashi 27, 2021 ngu Umhlahlandlela Wokuqondisa Shiya umbono